मेरो लव किन पर्दैन त…? – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > मेरो लव किन पर्दैन त…?
मेरो लव किन पर्दैन त…?
admin December 22, 2021 December 22, 2021 जीवनशैली, समाचार 0
निशा राई टोलको एकजना शुभचिन्तक आन्टी प्राय सोधिरहन्छिन् ‘हैन तिमी बिहे चाहीँ कहिले गर्ने नि। म अलि फिल्मी पारामा स्टाइल मारेर जवाफ दिन्छु ‘मन परेको मान्छे पो लोग्ने बनाउने नत्र सिंगलै ठीक।
एकदिन आन्टीले ममीलाई भनेकी थिइन् रे तपाईं की छोरी उ’त्ताउली छे टेढो टेढो जवाफ दिन्छे । हो, म उ’त्ताउली भएँ। किनकी जीन्दगीको महत्वपूर्ण निर्णय बिहेलाई कसैले शालीनतासँग जोडेर प्रश्न सोध्यो मैले त्यसको सिधा जवाफ मात्र दिएको हो। आन्टी प्राय सोधिरहन्छिन् ‘हैन तिमी बिहेचाहीँ कहिले गर्ने नि।
म अलि फिल्मी पारामा स्टाइल मारेर जवाफ दिन्छु ‘मन परेको मान्छे पो लोग्ने बनाउने नत्र सिंगलै ठीक। एकदिन आन्टीले ममीलाई भनेकी थिइन् रे तपाईं की छोरी उ’त्ताउली छे टेढो टेढो जवाफ दिन्छे। हो, म उ’त्ताउली भएँ। किनकी जीन्दगीको महत्वपूर्ण निर्णय बिहेलाई कसैले शालीनतासँग जोडेर प्रश्न सोध्यो मैले त्यसको सिधा जवाफ मात्र दिएको हो।
पछिल्लोपल्ट शितल दाहालले लेखेको मेरो बिहे किन हुँदैनरु लेखले मलाई असाध्यै छोयो। मैले पनि एकपल्ट जिस्क्याएर उनलाई सोधेकी थिएँ ए दिदी बिहे नगर्ने । कि धनी केटा खोज्दै हो । उनले हाँस्दै जवाफ फर्काएकी थिइन् ‘मजस्तो आफैं काम गरी खानेले के धनी केटा खोज्नुपर्‍यो। मलाई बिहे गर्ने केटा चैँ धनी हुन्छ बुझ्यौ। उनको जवाफपछि हामी मरीमरी हाँसेका थियौ।
ठट्यौली गफको मिठो सन्देश असाध्यै चित्तबुझ्दो थियो ‘लोग्नेको भरमा नपर्ने जीवन रोज्ने। तर समाजको आँखामा यस्ता ठट्यौली गफ दिने केटीहरू वेशरमी हुन्छन्। शालीन केटीहरू त खुरु खुरु सुन्छन् जवाफ फर्काउँदैनन्। झण्डै दुई वर्षअघि मेरो एकजना साथीको बिहेको कुरा चलिरहेको थियो। केटापक्षले केटी शील स्वभावकी छ कि छैन भनेर अफिसमा चेकबुझ गर्न पठाएछन्।
पत्रकारिता गरिरहेकी बोलक्कड स्वभावकी मेरी साथीले सुईको पाइछे अनि केटाको घरमै गएर भन्दिछे ‘मेरो सयजना केटा साथी छन् मुश्किलले दश जना होलान् केटी साथी। पहिले एउटा ब्वा’ईफ्रेन्ड पनि थियो अहिले ब्रे’क अप भइसक्यो। बाहुनकी छोरी हुँ जड्याँहा त होइन तर वाइन अलि अलि खान्छु।
केटीको त्यत्रो आँट देखेर केटापक्षले बिहेको प्रस्ताव तुरुन्तै रोके। पोथी जो बासेकी थिई त्यसमाथि ब्वा’ईफ्रेन्ड पनि बनाइसकेकी। बिग्रेकी केटीको ट्याग पनि भिरिसकेकी थिई उसले। महिनौ दिनसम्म घरमा गाली खाई। तर ऊ खुसी थिई। उसको शालीनता चेक जाँच गर्न आउनेलाई घरमै गएर गतिलो जवाफ दिएकी थिई। मेरी साथी अहिले अमेरिकामा पढ्दैछ। भलै केटापक्षका लागि ऊ बिग्रेकी साबित भई तर अहिले अमेरिकामा पढाईसँगै मस्त जीन्दगी बाँचेकी छे।
मेरो ममीको एकजना मिल्ने साथी थिइन्। अग्लो सलक्क परेको शरीर अनि लामो कपाल भएकी। सानो हुँदा उनले फरर अंग्रेजी बोलेको देख्दा हामी दंग परेर हेर्थ्यौ। अझ देब्रे हातले चुरोट समाएर रातो लिपिस्टक लगाएको ओठमा घुसारेर फ्वाँ फ्वाँ धुँवा उडाको देख्दा त क्या बोल्ड केटी हुँदी हो भन्ने लाग्थ्यो मलाई।
उनको घरमा विदेशी कुईरे साथीहरू आइरहन्थे। चारतारे होटलमा नौ पाँचको जागिरे भएपनि सिलाई बुनाईको काम गर्थिन्। साह्रै मिहनेती थिइन्। सानो छँदै आमा बितेको, बाबु ज’ड्याँहा थिए रे। आन्टीले आफनो भाइहरुलाई छोरा मानेर स्याहारेकी थिइन्। सधैँ घर व्यवहार चलाउन पैसा कमाउनपर्छ भन्थिन्। सानो सानो थैली सिउँथिन् अनि विदेशमा बेच्थिइन्।
चालीस वर्षसम्म मनले खाएको मान्छे नपाएर विहे नगरेपछि उनलाई टोलमा बिग्रेकी महिला भनेर कुरा काट्नेहरु धेरै थिए। उनी अरू महिलाभन्दा अलिक फरक थिइन्। राम्रो अंग्रेजी भाषाकै कारण धेरै विदेशी साथीहरु भए। मिहनेती र मिजासिलो स्वभावले धेरै साथीहरुको मन जितेर देश विदेश चहारिन्। बिहे उनको पहिलो रोजाईमा कहिल्यै परेन।
के वेपरवाह जीवन बिताउने यीनीहरूले सानो कुरामा खुसी हुने हर्कतको मूल्य चुकाउन बिग्रेकी केटीको ट्याग भिर्नैपर्छ । त्यही पात्र जब हामी टेलभिजनमा देख्छौं वाह वाह गरेर ताली पिट्छौ। तर किन वास्तविक जीवनमा यीनीहरुलाई फ्लप पारिन्छ। उहिले बाल्मिकीको रामायणमा पवित्रताको अग्नि’परीक्षा सीताले दिएकी थिइन्। एक्काइसौं शताब्दीमा आफै काम गरी खान्छु भन्ने केटीहरूले पवित्रताको परीक्षा क कसलाई दिनपर्ने हो । पुर्बेली न्यूजबाट ।
८ दिन पछि फेला परेका चन्द्रेले प्रहरीलाई दिए यस्तो बयान, जुन सुनेर प्रहरी नै तर्सिए…
भारतमा नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनबाट यति धेरैको ज्यान गैसक्यो!
निर्मलाको शव भेटिएको ठाउँमा नजानुको कारण बारे एसपीले मुख खोले
भारतमा शक्तिशाली समुद्री आँधी फानीले कहर मच्चाउन थालेपछि, जलसेनाले युद्धमा प्रयोग गर्ने विमान र हेलिकप्टर परिचालन ! नेपालमा यस्तो खतरा